Ogaden News Agency (ONA) – Shir ay soo qaban-qabisay JOKA oo lagu eegayay xaaladda Geeska Afrika bakhtiga KT Meles ka dib
Shir ay soo qaban-qabisay JOKA oo lagu eegayay xaaladda Geeska Afrika bakhtiga KT Meles ka dib
Posted by ONA Admin	/ August 26, 2012
Shir ay soo qaban qaabisay Jaaliyada Somalida Ogadenia ee JOKA ayaa xalay ka dhacay Magalada Cape Town. Shirkan ayaa waxa uu ahaa shir ay soo abaabuleen Jaaliyada JOKA & Ururka Ardayda Somalida Ogadenia OYSU oo isku dhafan wuxuuna ahaa shir loogu tala galay dhamaan Shacabka Somalida ee ku nool Magalada Cape town kaas oo ajandihiisu ahaa in lagaga hadlo xaaladda Geeska Afrika gaar ahaan markuu bakhtiyay dhiigyacabkii GA, iyadoo umadda Soaliyeed dhamaantood ay u ahayd farxad & damaashaad haduu bakhtiyay cadawgoodii 1aad Kaligii taliye Malaz Zanawi.
Shirkan oo ay iskugu imadaan dhamaan bulsha weynta Somaliyed ee ku nool magalada Cape Town qaybaheeda kala duwan ayaa waxa hoolka ku yaalo xafada somalida ay ku badan tahay ee Bellville soo buux dhaafiyay dhamaan bulsha weynta qaybaheda kala duwan sida, Odayaasha, Ganacsatada, Aqoonyahanada, Ardayda, Haweenka, Caruurta & Culama Owdiinka Magalada Cape town.
Bulsha wayntan Somaliyed ee shirkan ka soo wada qayb galay waxa ay dhamaantood ba ku wada faraxsanayeen xafladan sida wanaagsan loo soo agaasimay, waxayna dhamaan dadkii ka soo qaybgaay shirka ay aad ugu faraxsanayeen geerida dhiigyacab Meles Zinawi.
Shirka waxuu furmay sacada South Africa marka ay aheyd 8:30 Pm ama Habeenimo waxaana shir-gudoominaya Gudoomiyaha Jaaliyada Somalida Ogadenia JOKA Mudane Maxamed Shilaabo, oo ugu mahad caliyay dhamaan bulshaweynta Somaliyeed ee iskugu imaatay isagoo yidhi; “Waxa aan aad ugu faraxsanahay cawa meesha maamulda Somalia ay Tacsi qaran ay u sameeyeen Gaalkii Galada u weynaa ee Malaz Zanawi anagana aan ku faraxsanahay dhimashadiisa oo goobtan aan si farxad leh ugu canbaraynayno dhamaan intii u tacsiyadaysay ama ka naxday Geerida Malaz zanawi.”
Hadaba sida cada aheyd Shirka waxa lagu furay ayadaha Quraanka Kariimka iyo wacdi diini ah oo Sheikh Maxamed Ibrahim uu ku soo qatay cadowag Muslimiinta haba ugu danbeye Malaz Zanawi. Cadow walba oo illahay ku caasiya shacabkiisa Muslimiinta ah na dhib badan u gaysta halkaa umbuu ku dambayn. Shiekh Maxamed ayaa ad waxa uu ugu taag taagsaday khaladaadka ay galeen shaqsiyadaadka fara ku turiska ah ee iska dhigaya in ay madax yihiin ama ay shacab hogamiyaa, wuxuuna ugu baaqay in ay Illahay u soo labtaan towbad keenan, kuwaasoo ahaa shaqsiyadaadka Malaz ugu tacsiyadeeyay, wuxuuna ku tilmaamay inay diinta ka baxsantahay arintaa. Sheikha ayaa waxa dad ka muslimiinta ah ee gobtan iskugu imaatay rag & dumarba ugu mahad caliyay shirkan aad ka u qiimaha badan una ajirka badan ee ay ka soo qayb galeen.
Ka dib waxa lagu wareejiyay shaqsi ka mid ah qaban qabayaashii shirkan oo ah Hogaanka Abaabulka & Arimaha Bulshada JOKA Halgame Nuur Cabdi Salam. Mudane Nuur waxa uu hadalkisii ku bilabay Allahu akbar Allahu Akbar Ogadenia ha xorowdo gumaysiga madow ha dhaco somaliyana ha is racdo. Intaas kadib asaga oo hadalkiisa sii wato ayaa waxa uu u mahad caliyay dhamaan bulsha weynta somaliyed ee shirkan faxrada iyo rayn raynta leh ee kaligii taliya malaz zanawi geeridiisa an ku wada faraxsanahay .
Waxa lagu soo dhawayay codbaahiyaha Shiqsi caan ka ah bulsha weynta Somaliyeed gaara ahaan bulsha weynta Somalida Ogadenia ay aad u wada yaqanan waa Dr Daahir Baasto oo markuu soo kacayba dhamaan bulsha weynta gobta jogtay oo dhan ay u wada istageen iyagoo sacbinaya. Dr Daahir Basto ayaa waxa uu u mahad caliyay qaban qabiyaashii xafladan waxa uuna u mahad caliyay dhamaan inta ka soo qayb gashay rag & dumarba.
Dr Daahir Baasto ayaa waxa uu ka soo shekeyay Gumaysiga Ethiopia & tariikhda Somaliyeed asaga oo soo qaatay Halyeyadii Somaliyeed sida Axmed guray, Sayid Cabdila Xasan, kacdoonadii Nasrulaahi, Jabhadii Somaligalbed & Jabhada hada qoriga wado ee ONLF. Dr. Daahir waxa uu ku dheeraday tarikhda Ethiopia & Somalia asaguu ku soo gunaanuday taarikhdii Malaz Zanawi.
Waxa codbaahiyaha asagana lagu soo dhawayay Sheikh ku nool wadankan South Africa oo lagu magacaabo Sheikh Cabdirashiid oo ku dheeraday waxa ay ka qabto shareecada in shaqsi gaal ah oo dad ka shacabka muslimiinta ah dhibay Ilahayna ka qabtay in loo tacsiyadeeyo. Sheikh oo ka jawaabayay su’aal la waydiiyay wax ay ka qabto shaqsi gaal ah dad na dhibay in shaqsi muslim ah oo hadana somali ah in uu u tacsiyadeeyo gaalkaas iyo qoyskii ayaa ku jawabay; Shaqsigaas waxa aan dhihi karaa waa qof aan diintena wanagsan aqoon u lahayn, haduu yahay shaqsi diinta wax ka yaqanona waxaan dhihi lahaa Ilahay ha u towbad keeno in gaal loo tacsiyadeeyana waa Fisqi.”
Dadka gobta ka hadlay oo aad u tira badnaa ayaa waxa ka mid aha asagana Gudoomiyaha Ururka u dhaq dhaqaaqo xaquuqda bini adanimada ee Somalida South Africa marka la soo gaabiyana loo yaqano SASA Mudane Xuseen Axmed Omar oo hadalkiisii ku bilaabay ABEESO NIN KII KORIYOOW ADIGAA U AAYI, oo uu uga la jeeday Kaligii taliya Malaz Zanawi in uu sidaan noo dhibo anaga u sabab aheyn oo korsanay oo canshuurtii wadanka Somalia oo dad badan oo Somaliyeed ay u bahnayeen inuu asaga wax ku soo barto guri iyo nolol wanagsana uu ku noolado. Marka waxa aan dhihi karaa ayuu dhahay Mudane Xuseen Malaz waxa uu ahaa Abeeso marka illahay ayaa hada naga qabtay walow dhibadan uu noo gaystay waxaana ku faraxsanahay in wakhtigan kala guurka ah ee Somalia uu asaga illahay naga qabtay sababtoo ah M/weyne kasta oo Somaliya loo soo doortay isagaa minja-xaabinayay, laga bilaabo C/qaasim salaad ilaa Sheekh Shariif.
Isku soo wada duuboo dadka ka hadlay shirkan oo aad u badan ayaan waxa aan ku soo gaba gabaynaynaa Oday dhaqameed aad looga yaqano wadankan South Africa ugana da da weynaa dad ka ka soo qayb galay shirka qudbad aad u dheerna ka jediyay. Waa Sheikh Cabdulaahi Ubax oo aad ugu dheeraday tariikhada Somaliyeed herarkeda kala gadisan inta uu maqlay iyo inta uu u soo joogayba.
Shikha Ubax ayaa waxa ka mid ahaa hadaladiisa; “Aniga da’daan ahay markii aan yaraa wax la igu soo ababiyay cadow kale ma lihid aan ka aheyn Itobiya, waana wax run ah. Cadow kale ma lihin. Shacabka Itobiyana waxa lagu soo abibiyaa cadow gaada koobaad waa Somalida. Marka Itobiyaanka booskoodii way ka soo baxeen cadowgoodana way og yihiin hadaan nahay Somalida ku nool aduunka oo dhan maxan u ogaan la’nahay cadowgena Itobiya oo aaminsan in ay leadhay magalada Balcad oo Mugdisho inta ay u jirto aad wada taqaanan.”
Isku soo wada duboo dhamaan dad ka mesha iskugu imaday oo garayay boqolaal qof ayaa waxa ay ka midaysnayeen dhamaantooba sida ay ugu faraxsan yihin Dhimashada Kaligii taliye Malaz Zanawi waxa kaloo dad ka ay ka midaysnayeen dhamaan inta utacsiyadaysay oo Buug Tacsi ah na uga furay gudaha Somaliya magalo waba ha noqotee in ay yihiin dad wax ma garata ah tariikhdana ay xusi doonto.
Shirkan ayaa waxa inta uusan bilaaban waxaa la daawadsiiyay cajalada ka hadlaysa tacadiyadii uu u gaystay kaligii taliye malaz zanawi shacabka Somalida Ogadenia iyo shacabka Somalida xorta ah ilaa 1994 ilaa iyo 2012 dad ka dawanayay filin kan aya badan kood murugo la wada ilmayay marka ay arkeen muuqaal ka mid ahaa muuqlada cajalka hooyo somaliyed oo Mugdisho 4 wiil ay lahayd Ethiopian ka marka ay soo galeen magalada mudisho ay ku wada dileen isku soo wada duuboo cajaalada ayaa waxa ay aheyd cajalad dhaman shacabka ka soo qayb galay ay ku abuurtay wal wal iyo walaac aad na uga xumadeen somaldia u tacsiyadanayso Malaz oo shacabka somaliyed dhibkaas u gaystay .
Hadaba waxa ad kala socon kartaa ama aad ka dawan doontaa muuqalka shirkan Royal TV.
Oogle Yare/ South Africa